Kuverenga kwangu dema nepingi muna Chikunguru na Nyamavhuvhu. Chekutanga chikamu: iwo madema | Zvazvino Zvinyorwa
Kuverenga kwangu dema nepingi muna Chikunguru na Nyamavhuvhu. Yekutanga chikamu: nhema
Nyamavhuvhu yapera uye neiyo infernal kupisa. Ndanga ndichive nemamiriro ekunze panguva imwe chete ne kusimba uye kureruka mukuverenga kwangu. Ndokunge, ne moto, ropa uye mhosva pamazuva madema ezedikita. Uye na kudanana, whims uye eroticism mune akapfava. Pakave nemamwe mabhuku uye kuverenga zvekarehongu, asi aifanira kusarudza. Saka varipo iyo 3 yakasviba pane ino yekutanga chikamu.
Kune matatu mazita epasi rese anosaina a American, Italian uye French.
1 Kwete Makunguwo - John Hart
2 Aya ndiwo maitiro aunozviuraya iwe - Mirko Zilahy
3 Domino mhedzisiro - Olivier Norek
Hapana magunguwo - John Hart
The american John Hart ndakanga ndagara neni munguva ino yechando pandakaverenga Ruregerero. Ipapo ndakabata Mambo wenhema, iyo isina kupedza kundigutsa. Zvino zvanga zviri izvi Hapana magunguwoque hongu akazviwana futi. Ndinomuda style zvemunyori uyu, chirevo chake uye hunhu hwake kugadzira zvakadzama kwazvo. Mune ino novel anodzoka kuzonyora a zano rakanaka uye mavara aya anomirawo pachena.
Nharaunda diki inozununguswa ne kunyangarika kwemusikana. Gore rimwe gare gare, John merrimon, munin'ina wake ane makore gumi nematatu, anoona mashura akaita amai vake mukushushikana nemushonga uye akaita kuti baba vake vanyangarika zvakare. Hell-yakatsunga kumuwana, kana kumbomutsvaga, anozvipira kuongorora ega, nerubatsiro rweshamwari uye zvakare neiyo kubatana kwemupurisa ane chekuita nenyaya iyi, mutikitivha Clyde kuvhima.
Hunt, zvakare ane hanya nenyaya iyi, ane pamberi pe masimba ake uye kuda kwake, izvo zvakamutungamira kuti abatanidzwe nemanzwiro akasanganiswa kuna amai vemukomana. Kuonekwa kwe aimbo-con hofori uye kunetseka, tsaona yemotokari inokanganisa pane izvo mukomana chapupu uye kutsakatika kwemumwe musikana vanopedzisira vaomesa zvinhu. Uye vafungidzirwa vava kutanga kuva vazhinji.
Aya ndiwo maitiro aunozviuraya iwe - Mirko Zilahy
Nhau yekutanga yemunyori uyu weItari, ndaive nayo mune yangu portfolio kwenguva yakareba uye ndakazokwanisa kuitora. Uye nokutendeseka Ini ndanga ndakatarisira zvimwe, kunyange hazvo zvakanaka nguva dzose kupfuura Roma chero nzira. Pano kuchinaya chaizvo, kwasviba uye nechikara chinotyisa chakatumidzwa zita rekuti Sombra iyo inowanza nyika yavo yepasi pevhu. Asi muchengeti Enrico Mancini uye timu yake inogara vasati vasvika.
Mancini, akajairwa mupurisa weEuropean uyo akatora makosi ekupara mhosva kuFBI, ndiye zvekare classic stereotype yemurume anotambudzwa nekurasikirwa nemukadzi wake kugomarara. Ari panguva yake yakaipa, kunyange zvake timu, anokwanisa uye inoshanda, inogara padivi pako.
Asi kana nyaya kana nharaunda kana resolution yacho haina kusvika ipapo Izvo zvinonditungamira kuvhara bhuku, kugomera, uye kugutsurira mukugutsikana. Pamwe zvakanyanyisa uye zvimwe zvinotarisirwa kubva kumunhu mukuru anogona kuita zvirinani. Zvakare, iwe haugone kudzivirira kuenzanisa nemamwe mapurisa eItari ane yakawanda yakawanda charisma senge Schiavone kana Ricciardi, kupa mienzaniso miviri chete. Asi tal vez ndeyekuti iwe ungofanire kupa mumwe mukana.
Domino mhedzisiro - Olivier Norek
Yakanaka kwazvo iyi novel naiye lieutenant wemapurisa eFrance anotonga. Inotaridza sei kana mapurisa chaiwo achinyora nhema. Ivo vanongofanirwa kutora chokwadi uye nekuchinja mazita avo. Yakakwana giya mamiriro. Anochinja mweya we protagonist, kaputeni Victor mutengo (kwavari kunze Ndatsvoda), pasina fanfare, zvakaipisisa zvakashata kana kushungurudzwa kwega, kungoneta chaizvo neicho chokwadi chakasviba chaanoona mazuva ese. A timu zvakare chaizvo chaizvo, nehukama hwake, hunhu hwake kuchengetedza mumwe wakerwizi nekukonana kwaro kwetsika.
Una chivakwa chakanyatsovakwa game mavara akanaka kwazvo, pamwe ne kutsoropodza zvine utsinye hurongwa hwekutonga uye kunyanya mumajeri. Uye iyo domino mhedzisiro inoitika mune sarudzo uye zviito zvinopindirana nemunhu wese. Kumusoro, kutaura uchitsetsenura uye kunoshamisa mapundu uye kumonyorora pasina kubvumirana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Kuverenga kwangu dema nepingi muna Chikunguru na Nyamavhuvhu. Yekutanga chikamu: nhema
Kuverenga kwangu dema nepingi muna Chikunguru na Nyamavhuvhu. 2nd kuendesa: iwo maruva.
25 Mitsara yevakadzi vanyori